जान्नुहोस्, के हस्तमैथुनले लिंग बांगो बनाउँछ ? – Everest Dainik – News from Nepal
जान्नुहोस्, के हस्तमैथुनले लिंग बांगो बनाउँछ ?
डा. राजेन्द्र भद्रा, काठमाडौं । व्यक्ति-व्यक्तिअनुसार लिंगको नाप र आकारमा भिन्नता हुन्छ । यो लिंगको विकासका क्रममै देखिने कुरा हो । हाम्रो शरीरको पनि दायाँ-बायाँ भाग ठयाक्कै बराबर हुँदैन, केही फरक हुन्छ । शरीरको बीचमा पर्ने भएकाले शरीरको विकासको क्रममा लिंगमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन्छ । सबै पुरुषको लिंगको आकार एकै किसिमको हुँदैन र उत्तेजित अवस्थामा एकदम सीधा नभै लिंग आफैंमा केही मात्रामा टेढो (बांगो) हुन्छ । यो सामान्य कुरा हो ।
आफ्नो लिंग कुन अर्थमा बांगो मान्नुभएको हो तथा कसरी आफ्नो लिंग सामान्यभन्दा बांगो भएको थाहा पाउनुभयो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । कतिपयले लिंग शरीरसँग टाँसिएको कोणको कुरालाई लिएर बांगोपनको कुरा गर्छन् ।
टेढोपन निकै छ भने समस्या गम्भीर हुन सक्छ, तर त्यस्तो स्थिति विरलै हुन्छ । मूत्रनलीको विकासमा गडबडी भएर टेढोपन भएको स्थितिमा लिंग तलतिर बांगो हुन्छ । मूत्रद्वारको संक्रमण पनि बांगोपनको कारण हुन सक्छ ।
तपाईं विवाहित भैसक्नु भएकाले यौनसम्पर्कमा कुनै कठिनाइ भए-नभएको त पक्कै अनुभव गर्नुभएको होला, तर यहाँ तपाईंले उल्लेख नगर्नु भएका कारण यौनसम्पर्कमा कठिनाइ नभएको कुरालाई संकेत गर्छ । पुरुषलाई निकै चिन्ता हुने भए पनि हल्का किसिमको लिंगको बांगोपनले यौनसम्पर्कलाई कुनै किसिमको बाधा पुर्‍याउँदैन र यौनसुख लिन तथा दिन दुवै सकिन्छ ।
लिंग ज्यादै बांगो हुने एउटा प्रमुख कारण Peyronie’s Disease हो । यसको पक्का कारण थाहा हुन नसके पनि धेरै अनुसन्धानकर्ताले लिंगमा चोट लाग्दा थोरै नै भए पनि भित्र रक्तश्राव हुन्छ र त्यसमै fibrous plaque बन्न थाल्छ । यस्तो स्थितिमा बिस्तारै लिंगको लचिलोपन कम हुने हुँदा उत्तेजित लिंगमा बांगोपन देखिन्छ र पीडा समेत हुन्छ । कतिपय स्थितिमा लिंगमा यसरी चोटपटक लागेको होला भनेर राम्रोसँग सम्झना पनि नहुन सक्छ । अन्य केही स्थितिमा यसको कारण वंशाणुगत पनि हुन सक्छ भनिन्छ । कान्तिपुर साप्ताहिकबाट साभार